Warshadda quwadda korontada Forsmark - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Warshadda quwadda korontada Forsmark
La daabacay måndag 14 juni 2010 kl 11.51
Halgamayaal ka tirsan ururka Greenpeace: Forsmarkê dager dike.
Tiro labaatameeyo gaareeysa ee ka tirsan ururka dabiicadda u halgama ee Greenpeace ayaa saaka aroornimadii si sharci darro ah ku galay bannaanbax nabdeeysan warshadda soo saarta quwadda korontada ee Nukliyarka Forsmark.
Xubnaha ururka ayaa falkaa ku dhaqaaqay iyaga oo ula jeeda codeeynta baarlamanka dalku maalinta khamiista u codeeyn doono sharciyeeynta dhismaha warshado cusub ee ku shaqeeya quwadda korontada ee Nukliyeerka.
Halgameyaasha ayaa fuulay saqafka warshadda korontada iyaga oo isticmaalay jaranjarada gaari duq ah ee dabdamiska, islamarkaana halkaa suray boorar, sidoo kalena xirnaa dhar matalaya qorrax, dabeeyl iyo biyo. Waxaa sidoo kale war laga soo xigtay heeyadda wararka ee TT sheegtay in 15 ka mid ah gacanta lagu dhigay oo xabsi loo taxaabay.